Thwebula Camfrog 5.2.5231 – Android – Vessoft
Camfrog – a software for the zokuxhumana video kanye exchange of wombhalo phakathi abasebenzisi ezivela emazweni ehlukene. Camfrog ikuvumela ukuba ukuxhumana kwimodi ye yenkomfa yevidiyo, amafayela exchange, izipho virtual, ukwengeza abasebenzisi ohlwini umngane, njll software kuqinisekisa okusezingeni zokuxhumana quality kanye video nezithombe esicacile ngesikhathi ingxoxo. Camfrog iqukethe izindlu eziningi nokuxhumana zihlukaniswe amaqembu amazwe, izithakazelo kanye nezinhlobo umsebenzi. Camfrog lusenza ukudala ekamelweni lakho ingxoxo siqu iphasiwedi ukusayina noma imikhawulo ezinye.
High-ikhwalithi video lokuxhumana
Private futhi iqembu video chat
Izindlu eziningi zihlukaniswe amazwe kanye nezithakazelo
Kwakha ekamelweni lakho
Amazwana on Camfrog:
Camfrog Ahlobene software:
Ewebhu Ukukhulumisana Voice A isofthiwe for the free zokuxhumana ngezwi kanye exchange of imiyalezo phakathi abasebenzisi. Futhi isofthiwe kwenza ukuba abize mobile phones kanye yasendlini ngesikhathi nemali lekhokhwako evumayo.
English, Українська, Français, Español... Viber 6.3.1.63
Inethiwekhi Yokuxhumana Ukukhulumisana Voice Ewebhu Isithunywa idume umbhalo, izwi kanye video zokuxhumana. Futhi isofthiwe baxhumana izicelo kakhulu inkonzo Google ethandwa.
Chat Ukukhulumisana Voice Ewebhu Isicelo for imiyalezo nokuxhumana izwi. Futhi kukhona kungenzeka ingxoxo nabangane ezinkonzweni ezahlukene kanye nezingosi zokuxhumana nabantu.
Ewebhu Chat Ithuluzi ezanele zokuxhumana kanye nokwabelana ulwazi. Isici esiyinhloko isofthiwe yikhono ukuthumela izithombe zwacela phezu kwesikhathi.
Chat Ukukhulumisana Voice Ewebhu Iklayenti free bashintshisane umbhalo nezwi imiyalezo. Futhi kusekela zokuxhumana video kanye exchange of idatha ehlukahlukene.
Ewebhu Ukukhulumisana Voice Ithuluzi for the ukuxhumana phakathi abasebenzisi emhlabeni wonke. Isofthiwe ikuvumela ukuba wenze Voice namakholi wevidiyo noma wabelane imiyalezo.
English, Français, Español, Deutsch... ooVoo 3.0.2
Ewebhu Ukukhulumisana Voice Ithuluzi for the ukuxhumana phakathi abasebenzisi emhlabeni wonke. Isofthiwe ikuvumela ukushintshanisa imiyalezo noma enze izwi nevidiyo.
English, Français, Español, 中文... Retrica 3.5
English, Afrikaans, Українська, Français... eBay 2.3.0.25
Zokuham video Omunye ethandwa kakhulu inkonzo isiqophi nge base elikhulu ezahlukene. Isofthiwe Ukugunda search engine nekhono ukuze ulayishe amavidiyo inethiwekhi.